Orinasa sy mpamatsy ahidrano mitrandraka ahitra | Lemandou
Ny ahidrano nalaina avy amin'ny "Ascophyllum nodosum" amin'ny alàlan'ny teknolojian'ny enzymolisis biolojika.
Ny fizotry ny famokarana manokana dia mitazona ny sakafony voalohany, toy ny asidra alginika, fucoidan, mannitol, lodide, asidra amine, vitamina, mineraly, auxin, ary singa bitika, sns.
Vovoka na flakes mainty
Izy io dia manana tombony voajanahary amin'ny fitrohana haingana ny voly, singa mavitrika tokoa, indrindra ny mpandrindra ny fitomboan'ny zavamaniry. Tsy vitan'ny hoe mandrisika ny fitomboan'ny voly, manatsara ny kalitaon'ny voankazo, mampitombo ny yied, ary misy antitoxins koa izay manampy ny zavamaniry hiaro ny bakteria sy ny viriosy, handroaka ny bibikely, sns. Mitifitra; Izy io koa dia azo ampiasaina ho fitaovam-pandrafetana karazana zezika biolojika sy tsy organika. Ny vokatra dia fitrandrahana voajanahary, tsy misy poizina ary tsy manimba, tsy misy voka-dratsy.
Kitapo Kraft: harato 20 na 25kg miaraka amin'ny valin'ny PE
Boaty loko: kitapo foil 1 kg isaky ny boaty miloko, boaty miloko 10 ho an'ny baoritra
Carton: baoritra 25 kg miaraka amin'ny valin'ny PE
* Izy io dia afaka mameno haingana ny otrikaina, manatsara ny kalitaon'ny voankazo, mampitombo yied.
* Misy antitoxins izay manampy ny zavamaniry hiaro ny bakteria sy ny virus, ny bibikely mandroaka azy.
* Ampiaraho ny voninkazo sy ny voankazo, manitatra, manitatra ary mampifandanja ny fitomboan'ny ravina, manome otrikaina voa sahaza, manampy ireo zavamaniry haharitra ny fihenjanana amin'ny tontolo iainana.
* Araraoty ny tsimatimanota. Ny akora voajono ahidrano voajanahary dia afaka mitaona ny hery fiarovan'ny zavamaniry manokana, manatsara ny tsimatimanota amin'ny voly, ary manitsy ny fifandanjana roa fomba hahazoana vokatra tsara indrindra.
* Fanoherana ny adin-tsaina sy fampitomboana ny famokarana. Manankarena betaine, mannitol, polysaccharides ahidrano, sns., Manatsara ny fanoherana ny fihenan'ny rano, ny haintany ary ny fanoherana ny hatsiaka ary manakana ny aretin-bakteria sy ny holatra.
* Manatsara kalitao. Izy io dia misy karazana hormonina endogenous voajanahary voajanahary, singa manara-penitra, mineraly, sns izay mandray anjara amin'ny metabolisma amin'ny zavamaniry, izay mampiroborobo ny fanangonana zavatra maina, mampitombo ny atin'ny siramamy ao anaty voankazo, manome antoka ny fanitarana ny voankazo ary manitatra ny fiainana talantalana .
* Fitsipika Rhizosfera. Manome tontolo iainana ekolojika tsara ho an'ny fampandrosoana ny rafitra faka. Ny voly dia maniry haingana, manana faka be dia be ary manana tanjaka mafy. Izy io dia manamaivana ny soritr'aretin'ny lo faka sy ny fanapoizinana faka vokatry ny tany be loatra, metaly mavesatra, vonomoka, sns.
1. Famafazana ravina: ny vahaolana 1: 1500-3000 dia aondraka mitovy amin'ny ravina, voninkazo ary voankazo ny zavamaniry, mamafy indray mandeha isaky ny 15-20 andro.
2. Fanondrahana faka: afangaro 1: 800-1500 heny ny vahaolana amin'ny rano ary manondraka ny fakan'ny voly arakaraka ny habetsaky ny mahazatra. 400-1000 grama isaky ny mu, ny fampiasana manokana dia azo ahitsy arakaraka ny fahavokaran'ny tany eo an-toerana.
3. Fanotoana voa: afangaro amin'ny vahaolana 1: 1000 in aqueous, alona sy famafazana araka ny mahazatra.
1. Tokony hohozongozonina tsara alohan'ny hampiasana azy. Izy io dia azo afangaro amin'ny fanafody famonoana bibikely hafa hanatsarana ny firaiketam-po sy ny fidiran'ny fanafody famonoana bibikely ary hanatsara ny fahombiazany. Tsy tokony afangaro amin'ny fanafody famonoana bibikely mahery io.
2. Tsara ny manondraka amin'ny 8-10 maraina na 3-5 tolakandro aorian'ny maina ny ando amin'ny andro main'ny masoandro, ary apetraka indray raha misy orana ao anatin'ny 4 ora aorian'ny fampiharana.
3. Voarara ny mampiasa kaontenera vy, mitahiry amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, fadio ny jiro mivantana.
Previous: Zezika asidra amino
Manaraka: EDTA chelated TE